Rugta Ilmo soo rididda Virginia - Xarunta Daryeelka Caafimaadka Kaniisadda Falls
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church
Xarun caafimaad oo taranka la ixtiraamo oo shati leh oo qiimeysa go'aamadaada sida ugu wanaagsan u kobcin doonta mustaqbalkaaga, caqiidadaada, iyo qoyskaaga.
Xarunta Bukaanka (Balamaha / Foomamka) Gargaarka Dhaqaalaha
SHAQAALAHAY SHAQAALAHA IXTIRAAMKA LEH IYO KHATARTA AY LEEYAHAY ADIGA AYAA ADIGA KUU AH.
Xarunta Falls Church ee daryeelka caafimaadka, waxa aanu u heellannahay in aanu siino sirta iyo daryeelka caafimaadka haweenka ee sirta iyo ixtiraamka leh ee haweenka iyo qoysaskooda. Waxay ku taal Waqooyiga Virginia, waxaan ku leenahay sumcad qaran si aan u bixinno daryeel tayo leh sidii bixiye ilmo iska soo xaaqid ah jawi badbaado iyo daryeel leh.
Waxaan u fidinaa ilmo iska soo ridid ​​ilmo soo ridid ​​ah ("kiniinka ilmo soo rididda") ee uurka illaa 9 usbuuc ee uurka, iyo soo rididda nidaamka bukaanka illaa 15 toddobaad ee uurka.
Waxaan nahay XARUN DUMAR LEH OO LAGU SHAQEEYAY.
Shaqaalaheena iyo xarunteena waxay ujeedadoodu tahay inay abuuraan jawi aamin ah oo daryeel leh dhamaan bukaankeena. Naxariis, edeb, faham iyo ixtiraam waa aasaaska xiriiradayada bukaanka iyo shaqaalaha. Waxaan soo dhaweyneynaa bukaanada dhamaan dhaqamada, jihada galmada iyo muujinta jinsiga, oo ay kujiraan baahiyaha gaarka ah ee bukaanada LGBTQ +.
WAANU SOO BADNAYNAA NOOCYADA ADEEGYADA CAAFIMAADKA EE SOO SAARKA AH
Marka laga soo tago inaan nahay bixiye ilmo soo ridid, waxaan bixinaa adeegyada haweenka oo ay ku jiraan imtixaanada fayoobaanta ee sanadlaha ah, daawaynta natiijooyinka aan caadiga ahayn ee pap smear, iyo LARC (Kahortagga uur-qaadista dheer ee muddada dheer), oo ay ku jiraan gelinta IUD, irbado Depo-Provera, iyo beer-galinta gacanta hormoonnada Nexplanon.
XARUNTA DARYEELKA CAAFIMAAD EE FALLS WAA XUBNO KU FILAN KOOXDAN:
Xiriirka Qaranka ee Ilmo iska soo rididda Shabakada Daryeelka Ilmo soo rididda
Hawsha Difaaca Xarunta Caafimaadka ee Aagga Washington
Isbahaysiga diinta ee doorashada taranka
DC Doulas ee Xulista Xulashada
Himilada Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church:
Waxaan ku salaaneynaa kuna daaweyneynaa bukaan KASTA daryeel shakhsiyadeed.
Aqoonyahan caafimaad oo hal-hal ah ayaa ka jawaabi doona su'aalahaaga oo dib u eegi doona "Maxaad filan kartaa" & "Soo kabashadaada."
Waxaan nahay xamaasad leh bixinta taageerada iimaanka ku saleysan.
Daaweynta qofka oo dhan, maskaxda, jirka iyo ruuxa, waxaan aqbalnaa oo aan qaabilaynaa bukaanada oo dhan.
Waxaan ku siineynaa xulashooyin howlo "hurdo" suuxin leh nidaamkeena
Anaga oo ah bixiye ilmo soo ridid ​​ah waxaan u isticmaalnaa suuxinta IV ee ay maamusho oo ay kormeerto takhtarka suuxinta / suuxinta si aan kuugu siino khibrad dhab ah "xanuun la'aan".
Waxaad codsan kartaa inuu ku arko mid ka mid ah kilinigyadeenna ragga ama dumarka.
Waxaan nahay xarun caafimaad oo aad loo ixtiraamo oo jaamacaduhu ku tababaraan dadka deggan.
Comments ka bukaan ...
“Qof walba aad ayuu u macaanaa oo wuu fiicnaa. Labadaba doulas waxay ahaayeen kuwo cajiib ah wayna ila joogeen waqtiga oo dhan sidii aan waydiiyay. Kalkaalisada qeybta dambe aad ayey u feejigneyd sidoo kale.
Kalkaalisada caafimaadka ee ku sugneyd miiska soo dhaweynta - waxay qabatay gacantayda wayna ila hadashay intaan howsha ku guda jiray. Waxay ka dhigtay mid la adkeysan karo oo cidlo yar, mar walbana waan ugu mahadcelin doonaa taas. ”
“Waxaan dareemay sidii in shaqaalihii oo dhami ay ahaayeen kuwo saaxiibtinimo leh oo soo dhaweyn leh. Ma aanan dareemin wax xukun ah inkasta oo aan kaligay imid, haddana ma aanan dareemin cidlo. Kalkaaliyayaasha caafimaadka / dhakhaatiirtu waxay aad u soo dhoweeyeen sida aan u dareemayo raaxo la'aan waxayna si cad u sheegeen inaanan haysan wax aan ka walwalo. "
Ka hel faallooyin badan oo bukaan ah halkan…
Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan bartayada